FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA YORKSHIRE TERRIER, YORKIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Yorkshire Terrier, Yorkie
Sonny the Yorkshire Terrier amin'ny 5 taona
Ny Yorkshire Terrier dia alika kely milanja kilalao. Ny loha kely dia somary fisaka eo an-tampony, miaraka amina muotra antonony. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Mainty ny orona. Ny maso salantsalany maizina dia maizina miaraka amin'ny molotry ny maso maizina. Ny sofina miorina dia miendrika V. Ny tongotra efatra dia mahitsy raha jerena avy eo aloha. Ny ranjo boribory dia misy rantsan-tongotra mainty. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny rambony dia zatra mametaka amin'ny halavany ary entina somary avo kokoa noho ny aoriana. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny manisy rambony amin'ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Ny palitao lava sy manjelanjelatra dia tsara sy landy ary mianjera mahitsy amin'ny lafiny roa. Ny palitao dia tonga amin'ny loko manga sy manga. Ny vatana sy ny rambo dia manga ary ny ambin'ny amboa dia mena. Ny alika kely dia mainty, mainty ary mainty. Be loatra ny volo eo an-doha ka saika ilaina foana ny manangona azy ao anaty tarika mba tsy hiditra ao anaty vilia fihinan'ny alika sy hanomezana fahitana ambony indrindra ny biby. Ny tompona sasany dia misafidy ny hanaingo ny volo eo an-tampon-doha.
Yorkshire Terriers dia toa tsy mahatsikaritra ny habeny. Tena dodona hahita traikefa nahafinaritra izy ireo. izany alika kely mahery fo, be herim-po, mahatoky ary hendry. Miaraka amin'ny tompona maka fotoana mahatakatra ny fomba hitsaboana alika kely , namana mahafinaritra i Yorkie! Izy io dia be fitiavana amin'ny tompony, fa raha tsy an'ny alika ny olombelona mpitarika fonosana , mety ho lasa mampiahiahy olona tsy fantatra izy ary mahery setra amin'ny alika hafahafa sy biby kely. Mety hanjary ho falifaly ihany koa izy io, satria ny amboa dia manao izay farany azony atao mba hilaza aminao ny zavatra TIANY hataonao. Izy io dia manana lova tena izy ary mila olona mahatakatra ny fomba hahatongavany ho mpitarika. Ny Yorkies dia matetika no atolotra ho an'ny ankizy lehibe sy be fiheverana, noho izy ireo kely dia kely, ny ankamaroan'ny olona dia mamela azy ireo hiala fitondran-tena tsy tokony aseho alika . Manova ny toetran'ny alika io, satria manomboka mandray ny trano ny alika ( Syndrome kely alika ). Ny Yorkies izay lasa mitaky fitakiana sy miankina, toa mila fiheveran'ny olona betsaka sy / na fivoaran'ny fitondran-tena saro-piaro, mipoitra tampoka raha gaga, matahotra na be tezitra, dia manana tompona mila mieritreritra ny fomba itondrany ilay alika. Ny tompona izay tsy mahafaly ny filan'ny alika dia mety mahita azy ireo ho tonga overprotective ary lasa neurotic. Mora ampiofanina ny Yorkies, na dia mety mafy loha aza izy ireo indraindray raha tsy manome fetrany mety ny alika. Afaka ny ho izy ireo sarotra vaky trano . Ny Yorkie dia mpitily tsara. Rehefa miseho ny tompony pack leadership ho an'i Yorkshire Terrier, mamy sy be fitiavana izy io ary azo atokisana amin'ny ankizy. Ny olana dia mipoitra fotsiny rehefa ny tompony, noho ny haben'ny alika mahafatifaty dia avelao izy haka ny trano. Ny olombelona aza tsy ho tonga saina akory, na izany aza, fantaro raha manana fihetsika ratsy voalaza etsy ambony ianao, tonga ny fotoana hijerena ireo fahaiza-manaon'ny mpitondra entana. Tena alika kely mamy ireo izay mila tompona izay mahatakatra ny fomba hanomezana azy ireo fitarihana malefaka. Raha manana Yorkie ianao izay tsy mampiseho fitondran-tena ratsy, dimy ambony ho lasa mpitarika kitapo tsara!
Hahavony: 6 - 7 santimetatra (15 - 17½ cm)
Lanja: 7 pounds (3,2 kg)
Rehefa alika milanja 4 kilao na latsaka ny volo dia antsoina hoe teacup matetika. Mba hahatratrarana an'io, ny mpiompy dia matetika mila mamboly hazakazaka miaraka amina bala hafa. Indraindray ny alika dia manana olana ara-pahasalamana noho ny habeny kely tsy mahazatra.
rat jack russell terrier mifangaro
Ny Yorkies sasany dia mora tratry ny fangejana, bronkitis, aretin-maso, fahasimban'ny nify aloha, tsy fandeferana loatra amin'ny fametavetana ary fandevonan-kanina marefo. Tokony hialana ireo fitsaboana hafakely. Indraindray izy ireo dia mararin'ny paralysisa ao amin'ny foibe ateraky ny kapila herniated sy ny olana hafa ao amin'ny hazondamosina. Ny riandrano na ny dondona dia mety hiteraka fivakisan'ny taolana marefo. Fiorenana taolana tsy mahazatra any Yorkies mirefy 20 santimetatra latsaka. Matetika i Dams dia manana olana amin'ny fitaterana alika kely ary indraindray mila cesareans. Aza hadino ny manome sakafo Yorkies ny karazan-tsakafo maina na taolana mba hitsakoana mba hitandrina ny nifiny ho madio sy hatanjaka hatrany. Tokony hodiovin'izy ireo amin'ny biby ny nifiny mba tsy ho lavo izy ireo ary hiteraka aretina.
Alika tsara amin'ny fiainana an-trano i Yorkie. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Mahatsapa ny hatsiaka ny Yorkie ary aleony ny toetrandro mafana.
Alika kely mavitrika ireto izay mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazana rehetra, dia tsy hanatanteraka ny fironany voalohany handeha izany. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Raha mijery ny manodidina ny trano ny Yorkie toa ny bala mandehandeha, dia famantarana izany fa mila mandeha an-tongotra lavitra / lava kokoa izy, izay anaovana ny voditongotra eo anilany na ao ambadiky ny olombelona. Tsarovy, ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mitarika ny làlana. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda.
Alika kely eo amin'ny 4 eo ho eo
Ilaina ny fikarakarana tsy tapaka. Ny palitao notapahina dia mila fikolokoloana sy fikosehana isan-kerinandro. Topknot dia matetika mifatotra amin'ny tadiny. Ny palitao fampisehoana feno dia mila fikarakarana an-taonany maro ary matetika ny tompona biby dia misafidy ny hanafohezana azy ireo fohy, manome azy ireo endrika manjavozavo. Tokony hosasana tsy tapaka ny nifiny. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo.
Ny Yorkie dia noforonina tamin'ny alàlan'ny lehilahy miasa any avaratr'i Angletera, izay namolavola ny karazany ho an'ny fisamborana ny voalavo sy ny totozy mahatsiravina izay nameno ny toeram-pitrandrahana akanjo sy ny vatam-paty. Ireo alika mpihaza ireo dia mety hiditra ao anaty lavadavaka badger sy amboahaolo. Ny karazany dia tsy dia antitra loatra, fa ny niandohany dia tsy azo antoka tanteraka. Na izany aza, toa azo inoana fa ny Skoto lahy mitady asa any amin'ny fararano volon'ondry Yorkshire dia nitondra karazana tertera isan-karazany, anisan'izany ny Skye Terrier , Dandie Dinmont , Manchester Terrier , Maltais ary ny ankehitriny-lany tamingana Clydesdale (Paisley Terrier). Ireo dia nita tamin'ny karazan-karazany teo an-toerana, toy ny Leeds Terrier efa lava volo. Tamin'ny voalohany, ny Yorkie dia biby lehibe kokoa noho ilay hitantsika ankehitriny, fa tamin'ny fiompiana olona faran'izay kelikely indrindra dia nanjary kely ny alika nandritra ny taona maro. Namboarina ho alika lamaody. Nentin'ireo vehivavy tao anaty kitapony sy teo am-pelatanany ireo alika kely ireo. Ny Yorkshire Terrier dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1885.
Tamin'ny taona 1984 dia teraka i piebald Yorkie vokatry ny fihanaky ny génetika resesialy avy amin'ny Yorkshire Terriers roa. Ankehitriny ny alika piebald dia raisina ho karazany hafa izay antsoina hoe ny Biewer na Biewer Yorkie
Terrier, kilalao AKC
Yorkshire Terriers, Oliver 10 taona (ankavia) ary Mickey amin'ny 4 taona (ankavanana) - 'Ireto Yorkies mahafinaritra ireto dia i Oliver sy Mickey. Mickey no kely kokoa. Alika be volo sy be fitiavana izy ireo. Azoko antoka fa i Oliver, AKA Ollie raha fintinina, dia tena olombelona !! Niala tamin'ny fomba fohy izy ireo mifehy ny ankohonantsika tpt. Norobainay izy ireo ary ny hohanin-dreniny dia akoho masaka andrahoina isan'andro haha! '
'Salama, Cookie no anarako ary Yorkshire Terrier kely avy amin'ny Red Poppy Pets aho, tiako ny mitsambikina sy milalao.
bernese dog dog st bernard mix
Allie the Yorkie amin'ny 5 taona
Gia ilay Yorkshire Terrier, haben'ny teacup, amin'ny 2 taona
Lili ilay Yorkie kely tsara tarehy avy any Israel
Layla the Yorkie amin'ny faha-3 taonany— 'Layla dia zaza 3 taona, 6,5-lb. Yorkshire Terrier. Izy no fanampiana tonga lafatra amin'ny fianakavianay, ary tamin'ny fanaovanay ny devoara mialoha, dia afaka nisoroka ireo fitondran-tena mety hitranga isika rehefa manana alika kely . Layla dia tao anaty crate tamin'ny alina hatramin'ny nodiany, izay tena nanampy fiofanana vilany . Tokony ho 6 volana lasa izay dia nanana olana alpha izahay ary nividy ny boky faharoa nataon'i Cesar Millan izay nampianatra anay ny fomba mandeha tsara Layla. Hatramin'ny nandraisany an'io torohevitra io dia fantatr'i Layla izao hoe iza no mifehy — ary heveriko fa tena tiany kokoa ny mandeha an-tongotra kokoa! Layla dia mijaly amin'ny pancreatitis izay mahazatra amin'ny karazany kely, na izany aza, amin'ny alàlan'ny sakafo sy ny famenon-tsakafo dia voafehintsika io ary tsy anton'ny fahasalamany intsony izany. Ny isany dia ao anaty faritra mahazatra ary tsara vintana izahay fa tratra vao maraina na dia indroa isan-taona aza ny rà mandriaka. Halany ny zava-drehetra misy rano ary tiany ny mitaingina fiara (matory foana izy). '
Layla the Yorkie puppy amin'ny 6 volana
Layla the Yorkie puppy amin'ny 4 volana
Letizia, Yorkie tsara tarehy, sary natolotry ny Kennel My Insatiable Love
Kiwi the Yorkie amin'ny 9 volana
Buddy amin'ny faha-10 herinandro izao. Tsy tianao ve ny mamihina an'ity zazalahy kely mahafinaritra ity ?!
Juliet ilay Yorkie mahafinaritra dia afaka nandalo kilalao notsongaina, fa tena alika tokoa izy :)
Hijery ohatra misimisy momba ny Yorkshire Terrier
Sary Yorkshire Terrier 1
Sary Yorkshire Terrier 2
Sary Yorkshire Terrier 3
Sary Yorkshire Terrier 4
Alika Yorkshire Terrier: sary an-tsokosoko voaangona
tri color spaniel springer anglisy
Newfoundland sy st bernard mifangaro
mena Siberia husky manga maso
min pin boston terrier mix
fifangaroana labrador corgi amidy
yorkie shih tzu mifangaro vaovao